Sei Uchida A Two Wheel Self vakadengezera Electric sikuta - Jomo Technology Co., Ltd
Sei Uchida A Two Wheel Self vakadengezera Electric sikuta
Pane vaiva nokuriita kuti aiva nezvinetso bhatiri maitiro uye yomukati purangazve vanenge vanogumurwa. The bhodhi iri dzakagadzirirwa naye vanoteerera kugozha sensors kuti kwose kwamave kuizunguza uremu wako. Kana pavakakwira Swagtron, wa1 danho rutsoka panguva shure. Kana zvikaitika kuti kuvimba shure, iwe vanotsika shure. Kunyange zvazvo vakawanda vaizviti BALANCInG Scooters huchadzivisa kunyanyisa aimhanya, pakarepo kwamira uye overcharging, vane mafungiro kuti kutsungirira rinorema Zviidzo kuti refu durations nguva. Zvinogona kuita nyore wako Pandakatenderera mujenya. The broken-bhendi (kana Koowheel muchiso ) bhodhi aigona kuva nyore chaizvo kuti rwendo uye anonzwa saizvozvo ngozi zvikuru kuchienzaniswa nevamwe, kunyanya nokuti kumhanyisa zviri nyore zvakadaro, saka hazvina here sokuti inoda kukandira kukuparadza. The muchiso itsva magadzirirwe Koowheel bhodhi vaifanira kuenda kuburikidza-siyana macheki kunotora Ul 2272 chitupa.
Kana nguva yasvika kuitira kuti unogona kubuda uye kuwana zvinhu kunze, uye unofanira kuratidza misoro ndikarega iwe kuzviita, kuti Koowheel Mumwe bvumidzwa kubvisa mugwagwa 8.5inch mavhiri makuru maviri vhiri hoverboard K7 achaita basa newe. Swagway ndiye yendarama wechiduku ari hoverboard kutengeserana panyaya nhau. Nyika kunonyanya akasarudza zita kuripa hoverboard. Kuziva pamusoro features, magadzirirwo zvisarudzo, Specs, dzimwe nzira dzose aitaura hoverboards imwe uye une pfungwa izvo hoverboard rakanakira maererano zvaunoda uye muhomwe. Nokuti zvose-Nzvimbo rwendo, uchawana kuda hoverboard pamwe nemavhiri hombe. Mukati maminitsi mashoma kuti muzvichengete, uchawana sokuti aifarira kuti vakambova Scootin 'kwemakore. Koowheel Board touts pacharo somunhu hoverboard, asi zvirokwazvo sokuti kufanana zvikuru somunhu skateboard. Haisi chimwe chinoshamisira nemotokari, zviri zvakafanana skateboard uye sikuta chemasanganiswa kuti anunure mufaro munhu anofamba nayo. Averenga yedu Self vakadengezera sikuta 2 vhiri hoverboard Easy Vachiita 6,5 padiki Rubber Solid Tires akatungamirira Lights K8, maita yakawanikwa kusarudza kuti vakasarudzwa. Tinovimba kuti Mutengo yedu richishanda kwauri kuti usarudze kutengwa.
With simba nyore kuchinja kubva mukati kunze ndiEzekieri, ivo akakwana kushandiswa pamusoro fakaroti pazvikoro, pamitambo navarongo, uye zvakawanda. Tinoonga kuti vakawanda, kana kwete zvose, kuzvicheka-vakadengezera sikuta vatengesi kutengeswa vane chero chiitiko nechokwadi chokuti avo zvinhu haangavi unotambudza kuti vanhu kuti vashandise. Pashure muchitonga muviri mamiriro nzvimbo ine pakuvara zvakarurama mudanga gyroscope, kuti nemotokari digitaalinen uropi kunze kwakarurama mirayiridzo Via munhu yakaoma uye kunyanyisa-tifambirane nechepakati microprocessor, kuti bhatiri inobudisa injini kuti Kutsiga motokari. Uyezve, mashoko padded ibvi bhaa rakagadzirwa kuti optimize nzira iyo utariri rauchagara nzira iyo kuti mudziyo inogona vaifambisa, saka zvova nyore kuti imi anoonga nemagadzirirwo yacho gozvo. It anowedzera Zviri yepamusoro aruminiyamu nomusimboti mavhiri uye rabha matayi nyore Vatasvi.
Post nguva: Mar-21-2018